ट्राफिक जामका कारण सगरमाथामा मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुग्यो «
ट्राफिक जामका कारण सगरमाथामा मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुग्यो
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:३६
यो वर्षको बसन्त सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्न जानेको संख्या धेरै हुँदा चुचुरोमै जाम भएको छ। एकैपटक धेरै आरोहीहरु जाँदा जाम भएको हो। यसरी जाम हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या आठजना पुगेको छ। जसमा एकजना नेपाली पनि परेका छन्।
सरकारी सम्पर्क अधिकृतको रुपमा सगरमाथा पुगेका ज्ञानेन्द श्रेष्ठकाअनुसार आज एकजनाको मृत्यु भएको छ। उनकाअनुसार आजसहित सगरमाथामै मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको छ।
मौसमी अवस्था र आरोहण क्षमता अनुमान नगरी जथाभावी आरोहणको अनुमति दिने सरकारी व्यवस्थाका कारण पनि यस्तो भएको कतिपयको आरोप रहेको छ। (श्रोत : सेतोपटी )
यो पनि पढनुस...! सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गर्नेलाई कारबाही गर सरकार ?
काठमाडौं । विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथाको पवित्र स्थानमा बसेर एकजना अमेरिकन नागरिकले हस्तमैथुन गरेर नेपाल र नेपालीहरूको अपमान गरेका छन् ।
अमेरिकाको भर्जिन आइल्यान्डका एक ३६ वर्षीय युवकले अत्यन्त पवित्र र आस्थाको केन्द्र मानिने सगरमाथा शिखरमा हस्तमैथुन गरेर रेकर्ड कायमको दुस्साहस गरेका हुन् ।
ह्युज ए रेक्सहनले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा हस्तमैथुन गरिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ ।
करिम शाह निजारीले हस्तमैथुन गर्दै गरेको तस्वीर ट्वीटरमा पोस्ट गर्दै ट्वीट गरेका छन् । रेक्सहन बिहीबार सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पुगेका हुन् ।
अमेरिकन नागरिकले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सथरमाथाको चुचुरोमा पुगेर गरेको यो दुश्सासको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर हस्तमैथुन गर्ने अनुमति कसले र किन दियो भनेर कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना भएको छ ।
सगरमाथाको चुचुरोमा भगवान गौतम बुद्धको मूर्तिसँगै हस्तमैथुन गरेर अपमान गर्ने अमेरिकनहरूको समूह
सामाजिक सञ्जालमा सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गर्ने अमेरिकन नागरिक उनीसँगै रहेका साथीहरूलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
सिलिचुङको शिखरमा साइकल यात्री पराजुलीले पुर्‍याए साइकल
मुन्दुम ट्रेल (मुन्दुम मार्ग)को प्रवर्द्धनका लागि साइकल यात्री तेजप्रसाद पराजुली (एभरेष्टबाबु)ले सिलिचुङ टपमा साइकल पुर्‍याएका
रामदेवलाई पर्यटन दूत बन्न पर्यटनमन्त्रीको आग्रह
नेपाल सरकारले भारतीय योगगुरु रामदेवलाई पर्यटन दूतका रुपमा अघि सारेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक
विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्यहरुको सूचीमा नेपालको मुस्ताङ
लोन्ली प्लानेटले हरेक वर्ष विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्यहरुको सूची सार्वजानिक गर्ने गरेको छ । अरु वर्षहरुमा